Steam na-agbakwunye nkwado ala maka onye njikwa PS4, DualShock 4 | Akụkọ akụrụngwa
Steam na-aga n'ihu na-eju anya na ịdị mfe nke iji. Ọ nweghị ike ịdị nfe, ị nwere ike ịhọrọ iwu ị chọrọ na mgbe ịchọrọ. Nke bụ eziokwu bụ na ndị ọrụ Steam na-ejidesi ndị na-achịkwa Xbox ike n'ihi nkwekọ dị mfe n'etiti Windows PC na njikwa na ajụjụ. O sina dị, Steam ejidewo oke-ehi n’akuku mpi ma kpebie itinye mgbakwunye nwa afọ maka onye na-ahụ maka PlayStation 4 ozugbo na egwuregwu anyị na-ebudata site na ikpo okwu ahịa dijitalụ gị. Nnukwu nzọụkwụ nke Steam nke chọrọ inwe nkọwa na obodo ya.
Ihe a niile nwere ezigbo ihe kpatara ya, PlayStation 4 bụ njikwa egwuregwu kachasị ere ahịa nke ọgbọ ọhụrụ a, na-ere gburugburu consoles dị nde 45. N'ụzọ dị otú a, Steam ahụwo na ọ dị mma ịtụle na ndị ọrụ ya nwere ọtụtụ ohere ị nwekwara PS4 console, na ọ ga-adị mma inye ha aka, mee ka ọ dịrị ha mfe, zọpụta ha ego ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, na-enye ha ohere iji DualShock 4 njikwa ozugbo na enweghị nsogbu. N'ụzọ dị otú a, DualShock 4 na-eji Steam API arụ ọrụ nke ọma na egwuregwu ndị ike egwuregwu vidio dijitalụ kachasị ike na ahịa kwadoro. Steam na-aga n'ihu iju ndị ọrụ ya anya, na ahịa ahụ abịabeghị.
Kwere ya ma ọ bụ na ọ bụghị, mgbe ị jiri njikwa PS4 site na Steam API, ọ na-arụ ọrụ nke ọma yana Steam Controller. Nwere ike ime otu ihe ahụ. Naanị pịa bọtịnụ ahụ na Steam API ga-elekọta ndị ọzọ.
Na mgbakwunye, ha ekwuputala na ha ga-emezi njikwa maka usoro eziokwu nke mebere HTC Vive, mmelite maka Steam nke ga-atọ ndị nwe nke iko eziokwu ndị a mma. O sina dị, ezigbo ihe mere ha jiri kwe ka iji PS4 njikwa ya na Steam API bụ na ọ nwere ogwe aka na ọtụtụ gyros, nke na-enye gị ohere iji sistemu njikwa a rite uru n'ezie.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Home » Videogames » Steam na-agbakwunye nkwado ala maka onye njikwa PS4, DualShock 4
Nokia D1C a tụrụ anya ya nwere ike ịbụ mbadamba ma ọ bụghị ama